သင်ဇာဝင့်ကျော် | Myanmar Model
Myanmar Model	a collection of beauties of myanmar	Blog
သင်ဇာဝင့်ကျော် Like this:Like Loading... 90 comments so far kabyar lay
June 11, 2008	hay sexy girl,
u ka taw2 sexy kya dar ba`.u taw2 other country ko ta ball kya lar.a shat ta yar kin ma` kya tal.u myanmar girl ma hote buu lar kwa.u movie daung ma kyi chin dot buu.sate pyat
liet dar.sorry thinzar ?de lo pyaw da`atwat.
be careful AIDS?
June 18, 2008	hey sexy girl be careful AIDS.
August 23, 2008	hi
အလကားနေ အေအိုင်ဒီအက် ကူးမယ်နော်
September 25, 2008	၀ါသနာပါလိုခင်ဗျာ
October 3, 2008	တော်တော်သဘောကျနေတယ်ပေါ့
အေးအေး တရားသဘောနှင့်ကြည့်ရင် အပုတ်ကောင်ကြီးပဲကွဲ့
October 18, 2008	အဲ လိုနေတာပျော်နေတယ်ပေါ့
October 23, 2008	ရှက်စရာကြီး…
October 23, 2008	ကောင်မ… သိပ် ရွနေ တယ်ပေါ့
November 11, 2008	feel bell
November 25, 2008	ကောင်းလိုက်တာ
December 1, 2008	ဘာတွေပဲပြောပြော … အကောင်းဖက်ကြည့်ရင်… အာလုံး ကောင်းတယ် . . . အကောင်းဖက်ကပဲမြင်တယ် . . .
December 27, 2008	Nin Phin ka tot might par tel..Dar pae mae bel na kg saw htar pe p lal tot ma thi bu.Ur ass is nice but i can’t know howmany guys have fucked with u.
December 27, 2008	And i also want to fuck with u.
December 27, 2008	And i want to u to know my dick is huge….
January 19, 2009	ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ သင်ဇာ ကို ချစ်တယ်
ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ရင်ခုန်တယ် ဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်…အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် သူက…မပြောပြတတ်လောက်အောင်ပါပဲ..
January 24, 2009	အရင်ကတော့ အရမ်းကြိုက်မိတယ်…
January 26, 2009	တကယ်လုပ်မှ အဟုတ်ဖြစ်တာပါ
January 28, 2009	I am fucking at hole please?
February 15, 2009	ကောင်းတယ်ဗျို့
March 17, 2009	ကောင်းပါတယ်
April 10, 2009	မမ
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တော့ဒီလိုပြုမူမနေထိုင်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်.. လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိကြတာပဲ ..မမ လည်း အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့မြန်မာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ..ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလစ်လျှူ ရှုထားလို့ရပါတယ်..ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဟာဘာလဲဆိုတာတော့ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်..အခုတွေ့နေရတာတွေဟာ တကယ်ဟုတ်လားမလားတော့မသိပါဘူး..ကာယကံရှင် မမကလွဲပြီး ဘယ်သူပိုသိနိူင်မှာလဲ…သိက္ခာရှိတဲ့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ မေ့မပစ်လိုက်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျာ…. ကျွန်တော်ပြောတာအမှားပါရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်…
April 12, 2009	မမရေ..
နှစ်သစ်မှာ နှစ်ဖြာသောသုခတွေ ထာဝရပြည့်ဝပါစေဗျာ.. မမရဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးပါ..
April 30, 2009	ငါလည်း သင်ဇာကို ကြိတ်ချင်တာပဲကွ။
မင်းတို့ ချည်းပဲ မလုပ်နဲ့လေကွာ။
ငါက အရှက်မရှိရင် မရှိသလို လိုးတတ်တယ်နော်။
ကောင်မ သတိထား။ ဖင်ကို ပါကင်ဖွင့်ပေးမယ်နော်။
May 22, 2009	ပုံတွေမြင်ရတော့မှ အထင်ကြီးသမျှအလားပဲ ဆောက်ရှက်မရှိတဲ့ဟာမ ။
July 29, 2009	ညီမလေးကို အရမ်းချစ်တယ်……
August 11, 2009	Dear sister,try your best in doing good things but when you are doing there will be block from those who hate and who don’t want to see success in your life and try to change when you know that you are at the wrong side.(There is no late to begin again).Thank you.
August 16, 2009	မမ သင့်ဇာ ကို မျိုး အ၇မ်း ချစ်တယ် သိလား
August 19, 2009	ဟဲ့ကောင်မ……..!
September 4, 2009	မြန်မာမိန်းကလေးတွေ တော်တော်ဆိုးနေကြတယ်။ ရင်လေးစရာဘဲ။
September 11, 2009	မြန်မာ မိန်ကလေးများ သတိထားကြပါ၊
November 10, 2009	မင်းကို အားပေးနေတဲ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ မြန်မာ့ယျဉ်ကျေးမှု့ကိုတော့ မမေင့်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
July 19, 2010	အပြင်သိပ်မထွက်နဲ့ သတိပေးတာ ……………တော်ကြာထွက်လာရင် နောက်ကနေ ခွေးတွေတစီစီ လိုက်နေမှာစိုးလို့ဟေ့ …………….မင်းတို့ကြောင့် မြန်မာမိန်းခလေးတွေ ဈေးတော်တော်ကျကုန်ပြီ………………
December 20, 2010	အဲလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်အမျိုးကောင်းသားကမှတစ်ဘဝလုံးလက်တွဲမှာမဟုတ်ဘူး
February 3, 2011	ဟူလေသွားမယ်
February 19, 2011	မမမမမမ
February 19, 2011	သင်ဇာကို လို့ချင်သယ်နော်…မနေနှိင်တော့ဘူနော်..လို့မယ်နော်….သင်ဇာဝင်ကျော်
June 25, 2011	……အော့…အော့……အော့….၇ွံစရာကြီး…အော့..
July 27, 2011	Do u want to fuck with me
October 7, 2011	စားချင်တယ်
October 19, 2011	သင်ဇာ နင်ဒီလိုပဲနေတော့မှာလား ? သူတို့ပြေနေကြတာနဲ့တင်သေလောက်တယ် ငါနင့်အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး . အကောင်တွေကလေသူတို့ကြိုက်ရင် မကောင်းတဲံ့ကောင်မလဲ အမျိုးကောင်းသမီးပါပဲ နင်လည်းမမှန်သလို သူတို့လဲမကောင်းပါဘူး.စောက်သုံးမကျတဲ့အကောင်တွေ သွားလေလိုက်လို့ပြောလိုက် အကောင်တွေဆိုရင်တကောင်မှမကောင်းဘူး နှာဘူးတွေကြီးပဲ ဖာကောင်းတွေကြီးပဲ.
November 30, 2011	လီးကိုတေင့်တနေတာလား
February 1, 2012	ကောင်မတွေက တစ်ကယ်တော့သူတို့စိတ်မှာ အရမ်းအလိုးခံချင်ကြတယ်ကွ
တော်တော်လေးလဲ စောက်ဖုတ်ယားကြတယ်ကွ ယောင်္ကျားတွေထက်အဆပေါင်းများစွာ
ပြင်းထန်တဲ့ သတ္တ၀ါ အမတွေပဲ အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ ဟိုဖုံးဒီဖုံး လေးနဲ့ စိတ်ထဲမှာ
တော့ ယောင်္ကျားတွေမြင်တိုင်းခံချင်နေကြတာ မိန်းကလေးဆိုကတည်းက ဖင်ခံချင်တဲ့
စိတ်က အမြဲရှိတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့က မိန်းကလေး သိက္ခာထိန်းနေလို့ပေါ့ မဟုတ်လို့က
တော့လမ်းလည်ကောင်မှာတောင် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို အသေလိုးပြ နိူင်တယ်
April 27, 2012	သင်ဇာလေး ကို သိပ်ချစ်တယ်
April 28, 2012	ဒါမျုိုးကို အမျိုးသမီးရေးရာက ကြည့်လို့ကောင်းနေလား မင်းသမီးမဖြစ်ထိုက်ဘူး မတင်ရွှေ ဖြစ်ခိုင်းရမှာ…………..
April 30, 2012	မမ net မထိုင်ဘူးလား ကိုယ်ကိုကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်
ခေတ်ဆန်တာတော့ဆန်ပေါ့ ခေတ်လွန်သွား၇င် မကောင်းဘူးလေ.ပြီးတော့ မြန်မာမိန်းကလေးလေ
May 4, 2012	သိပ်လှတာပဲ
May 8, 2012	မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေ၇င်လဲဖုန်းနံပါတ်ပေး…….လာခဲ.မယ်….:ok
May 14, 2012	ဘယ်နှစ်ခါလောက် ဆက်ဆံဖူးလဲ ယောက်ျားဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံပြီးသွားပြီလဲ
June 2, 2012	လုံးဝကိုစိတ်ပျက်သွားပြီ
June 19, 2012	သူလည်းသူဝါသနာအရပေါ့ခွင့်လွင့်ပေးလိုက်ပါ
June 23, 2012	ဟုတ်ပါတာယ်ကွာ ၀ါသနာအရ လုပ်တာပါ ငါလဲလာခဲ့မယ်နော်
July 2, 2012	ကိုယ်လည်း သင်ဇာ ကိုအရမ်းလိုးချင်တယ်။ ခံမှာလား?
July 10, 2012	ကောင်းပါတယ်
July 27, 2012	သူဘယ်လိုဘဲနေနေလေ သူ့သမိုင်းပါ ..ဒါပေမဲ့ အရှတ်မရှိ ပတ်ပတ်စက်စက် ပြောတက်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေပါးစပ်ကတော့ သူအရှတ်မရှိတာထက် ပိုဆိုးနေသလိုပဲနော်….ကိုယ့်ဘာပြောပြော ဘယ်သူမှကိုယ့်ကို မသိဘူးဆိုတာထက် ကိုယ့်ရဲ့်စောင့်နတ်ကတော့ သိနေမှာပဲ …ယောင်္ကျားကောင်းဆိုတာတွေက လဲအခုခောတ်မှာ၇ှားသထက်ရှားလာပါပေါ့….
August 3, 2012	ဆောက်ရှက်ကိုမရှိဘူးကွာ……………. လှတောသား…Myo Lay
August 10, 2012	လိုးချင်တယ် လိုးချင်တယ် လိုးချင်တယ်
August 12, 2012	ခင်ဗျားကလည်းစောက်ရှက်မရှိပြရဲတော့ ကျွန်တော်တို့ယောက်ကျားလေးတွေဘက်ကလည်း ခင်ဗျားကို စားချင်တယ်ဗျာ………… ကဲ မှတ်ပြီလား
August 14, 2012	ဘယ်လိုပြောရမှန်ေးတာင် မသိတော့ဘူး…..
September 3, 2012	မမ အားပေနေလျှက်ပါ
September 7, 2012	ကောင်းတယ်ဗျာ
September 14, 2012	မြန်မာဆိုတာဒါလားကွ။တော်တော်ဆိုးဆယ်။ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ။မြန်မာမင်းသမီးတွေအားလုံးက စီလိုလားလို့မေးနေကြပြီ။ ဘာမှ မပြောလိုဘူး။မြန်မာမင်းသမီးတွေ ပွဲမတိုးနိုင်တာဒါကြောင့်တဲ့။သူများနိုင်ငံမှာနေ ပြီးမြန်မာအကြောင်းကို ဂုဏ်ယူနေတဲ့ငါ၊ဒီဟာမြင်တာနဲ့ တောင် ပြန်လာချင်စိတ်ကုန်နေပြီ။
Thang Bu Naing
September 14, 2012	Ifagirl is no longer virgin, it means that she will never become good in all her lifelong. Thinzar….be careful, you are no longer virgin…..No boy will likeagirl who is not virgin…that will really bring diversity in family and conflicts in communion. On the other hand, it isameans of committing sin before our religious sect. Soooooo…baddddddddddddddddd
October 14, 2012	အစကတော့ဖြူဖြူ အခုတော့ညိုသွားပြီ။
October 23, 2012	မသင်ဇာဝင့်ကျော်က အရမ်းချောတယ်ဗျာ နှမျှောလိုက်တာ
November 2, 2012	ရေးနေရတာတောင်လက်သနတယ်ငါကိုလိုးခိုင်းရင်ပါးစပ်ပဲလိုးတော.မယ်
December 25, 2012	လူတစ်ယောက် စိတ်တမျိုးပေါ့ ကိုလည်း ကောင်းတာ ကို အမြဲတမ်း မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး တစ်ခါတ်လေတော့ စိတ်သဘောအရဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ……..ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဆက်ကြိုးစားပါလို့ အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မာလို ၀တ်စားဆင်ယင်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ……………ကိုဇ
December 28, 2012	မမမမအမမမမ
March 4, 2013	ဖင်ခေါင်းမကျယ်နဲ့ ခေါင်းဝင်သွားမယ်
April 10, 2013	တင်ဇာဝင့်ကျော်နင်ကိုလေငါ့ရဲ့လီးတုတ်ကြီးနဲ့နင်စောက်ပတ်ထဲကိုထိုးထည့်ချင်တယ်
June 18, 2013	စိတ်ညစ်မနေပါနဲမရယ်
July 3, 2013	တင်ပေုလို့ thankyou
July 27, 2013	ဘာမမ၀တ်ဘဲဖင်သုံးလုံးပုံတင်ထာပါ
August 4, 2013	လီးလိုပဲ ငါကြိုက်တဲ့ မင်းသမီး ငါကဆော်နဲ့တူလို့ ချစ်လိုက်ရတာ မင်းမေစောက်ပတ်……
September 12, 2013	စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့သမျှဆုံးရှုံးသွားမှမြစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ကာယအလှပြတာကိုတော့နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်လွန်ကဲကဲတွေတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အစ်မပရိသတ်တစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့တကယ်စိတ်မကေင်းဘူးကိုယ်လေးစားပြီါ်ချစ်မြတ်နှိုးရတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုဒီလိုပြောနေကြတာကိုပေါ့။…….ကျွန်တော်ပြောတာမြှးသွားခဲံ၇င်ဆောရီးပါ။
January 22, 2014	သူ.မှာလဲသူ.အခက်အခဲနဲ.သူလေမပြောကြပါနဲ.ဗျာ
July 5, 2014	မတင်ဇာမမကိုသမုဒ္ဒရကင်းကားထဲမှာအကြိုက်ဆုံးမမကိုအရမ်းချစ်တယ်မမဘာဘဲဖြစ်နေနယောကျာင်္းဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့အိပ်အိပ်အရမ်းချစ်တယ်
July 6, 2014	She is fucking lady
October 18, 2014	နေကောင်းလားအဆင်ပြေလား
October 30, 2014	အစကတော့ကြိုက်မိတယ်အခုတော့ဟသ်း။၊။။။။
November 6, 2014	မြနမာကိုနာမည်ဖျက်နေတာ
November 28, 2014	hello hi Barlook Naybarlay ha Aww ,..
I’ve shared,According to the new charter of the association of southeast Asian Nations.doc
December 1, 2014	EiEi Heata Noe’barlook Naybarlay Ha!!
December 2, 2014	AA Thu Kha Barlook Ahe ,.!
December 4, 2014	nyinyi minkhalarbar,..!
December 7, 2014	hello barlook naybarly,.
December 12, 2014	inoveyou’mama
January 21, 2015	Min Kha Laarbar Nayknow barlar,.?
January 29, 2015	Im Thu Ko Tityatha Lobar,..
May 25, 2015	hi hello nyinyi minkha larbar,..
August 17, 2015	hi hello nay know barlar,..